Azu Ochie & Ngwá Ọrụ igbe Manufacturers & Suppliers - China Fishing Warms & Ngwá Ọrụ Box Factory
Purple Series N'èzí Fishing Box
Ihunanya odo odo azu igbe na irè akara, ujo na dobe eguzogide, kemwepu baffle. Enwere ike iji ya ịchekwa ihe eji egbu azụ, dị ka azụ, eriri azụ, wdg, yana ụfọdụ ngwaọrụ na ngwa, yana ọrụ dị iche iche.
Nkebi Nke: BX011
Nkọwapụta: 198 * 145 * 40mm
Ike: Ngalaba 18
Agba: Piel / acha odo odo
Ojiji: Ikụ azụ
Azu mere igbe na Kemeghi dividers
Igbe igbe dị iche iche dị iche iche, ezigbo onye inyeaka maka ịkụ azụ. Kpamkpam chekwaa ngwa ịkụ azụ gị, nko, bait, wdg. Ọdịdị a dị mfe ma dịkwa mfe iburu.
Azu Plastic Pipe Box
N'èzí azu igbe, nchekwa igbe, nri idide igbe, nke a bụ a uzo uzo azu igbe na Kemeghi dividers na otutu ọrụ.
Omenala Fishing Plastic Bait Box
Igbe nchekwa akụrụngwa dị iche iche nwere usoro ịhazi ya. Nwere ike hazie ụkpụrụ ọ bụla ịchọrọ n'elu iji gosi ụdị njirimara gị.
Osisi na White Printing Box Lure Box
Orangedị oroma na agba ọcha na-egosi n'ụzọ doro anya ụdị ejiji. Mbipụta ahụ dị n'elu na-egosipụtakwu ụdị onye ị bụ. N'ezie, ị nwere ike ibipụta akara ngosi akara gị iji gosipụta akara ika gị karịa. Igbe siri ike, nke bara uru na ọdịdị. Nke a bụ nhọrọ kachasị mma gị. Ọdịdị a dị mma ma ime ahụ dị mma, dabara adaba maka ụdị azụ dị iche iche.
Oji Oji na Oji Ogwu Na-achikota Ihe Agbanwe
A ojii na ọcha imewe igbe azu. Isi mkpuchi ojii, isi ahụ na-acha ọcha, ị nwere ike ịhụ nkesa dị n'ime ma dị mfe ịchọta ihe. Imewe oghere nwere ike ịnabata ihe dị iche iche. Mfe imewe, enweghị mgbagwoju anya, dị mfe iji. Mkpọchi ahụ siri ike ma ọ naghị emebi ngwa ngwa.
Fishing Plastic Piel Igbe Lure Box Black
Atọ ojii nke igbe azu. Uzo + oji, oji + uzo, na oji oji. Nwere ike ịhọrọ kpam kpam dị ka gị mkpa. E kewara ime n'ime imebe grid, enwere ike ịkewapu nkewa ahụ ma megharịa ya, enwere ike ịgbakọta ime ahụ n'ogo ị chọrọ, n'efu na mgbanwe, na adaba iji.
Lake Blue N'èzí Fishing Box
Ekebe ohuru ohuru na acha anụnụ anụnụ di na acha anụnụ anụnụ zuru oke ma choputa nke ichoro, ihe eji eme enyi na aka di nfe ma buru. Obere nha, ikike buru ibu, itinye oghere dị elu. Egwuregwu plastic na gburugburu ebe obibi, igbe igbe translucent, ihe nchekwa dị n'ime bụ ihe doro anya na anya.
Plastic Clear mbuso agha Box
Igbe nkedo azu eji eme plastik, nke ejiri ihe eji eme ka ihe di nma na gburugburu ebe obibi n’enweghi BPA, nwere mpaghara 18, nke enwere ike idozi n’uzo iji kwado ngwa oru gi di iche Akụkụ gbara gburugburu adịghị emerụ aka gị. Ọ dị mfe ibu ma nwee ikike ịnabata ike. Ọ bụ onye inyeaka zuru oke maka ịkụ azụ n'èzí.
Kụ azụ Azụ Ngwá Ọrụ Igbe
Igbe nchekwa transperent dị elu nwere elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ centimita iri, ebe nchekwa ahụ dịkwa ike karị. Usoro uzo na-enye gị ohere ịhụ ihe dị n’ime ya nke ọma ma dịkwa mfe iji weghachite. Mere nke BPA - ihe plastik na - akwụghị ụgwọ, gburugburu ebe obibi dị mma na inogide.